Yiba enempilo, esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe noma umphimbo
Njengoba sekunama-ingane njalo umama osemusha eqala ngobumnene xaxa futhi ngokucophelela empilweni yabo. Ungakwazi wazi ngisho ukuthi kwakhiwa le ndlela yokuziphatha is endaweni ethile noma enganakile, ngoba ukwesaba ukulinyazwa ingane likhulu kakhulu. Nokho, ngezinye izikhathi e Naphezu kwakho konke ongase kukhona ubuhlungu emphinjeni. Futhi manje-ke kubaluleke kakhulu ukuba ziqonde ukuthi kungani kwenzeka, ukuthi lezi izinhlungu ukwenza ngayo futhi sibaphathe ngayo emphinjeni.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, kubalulekile ukucacisa yini eyabangela ubuhlungu emphinjeni, ngoba nje ungakwazi agule. Njengomthetho, lena ingenye nje izimpawu eziningi zalesi sifo. Okokuqala nokusemqoka, yebo, kudingeka ubheke Udokotela wezindlebe onguchwepheshe, abangakwazi kahle ukuhlonza isifo ethize futhi uphethwe.
Ngokuvamile nomphimbo obuhlungu, ephelezelwa ushintsho izwi noma ngokungabi nayo, kanye isifuba esomile labona ukukhwehlela, pharyngitis uthi. Lena ukuvuvukala umphimbo kubangelwa ngokuvamile amagciwane, futhi ezimweni ezingavamile, nama-virus ezinjengomkhuhlane. Kanjani ukwelapha emphinjeni kanye pharyngitis engcono uyazi uchwepheshe kuphela. Ezimweni eziningi, sokunquma pharyngitis, babelwe amalungiselelo eziyinkimbinkimbi, kuhlanganise Septolete, Strepsils, Faringosept. Ukuze uthole ngempumelelo balahle lesi sifo kuyadingeka, ngaphezu nemithi oyinikezwe udokotela, ukudla okuthile, kakhulu ukunciphisa umsebenzi izwi. It is hhayi Kunconywa ukuba adle ukudla okubabayo, okumuncu ne okunosawoti. Kubalulekile ukuqeda kusukela ekudleni utshwala nokubhema ngesikhathi egula.
umphimbo obuhlungu kungabuye ephelezelwa elomile tickling, isifuba esomile kanye nemfiva okuncane. Lokhu kusikisela laryngitis - ubulwelwe lapho kukhona ukuvuvukala umphimbo. Ekunqumeni ukuthi ukwelapha emphinjeni laryngitis, kumelwe kuqala kunazo zonke qiniseka ukuqeda kungenzeka lokubuya kwesifo. Ukusetshenziswa kwanoma yiziphi izidakamizwa kuphela is hhayi Kunconywa, kungcono ukulalela imiyalelo kadokotela. Ukuphuthumisa ukuphulukisa nokudla futhi elinamanzi amaningi nenala iziphuzo efudumele.
Uma kukhona phakathi izimpawu imfiva, kukhona nokwanda okuphawulekayo e-lymph, imisipha obuhlungu, esiswini, kuphephile ukuxilonga umphimbo obuhlungu noma namathansela. Esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe emphinjeni kuleli cala, abantu abaningi bazi, kodwa, nokho, impumelelo nokuvulwa namanje kuncike udokotela. Nguye kuphela ongabhubhisa linqume izidakamizwa, ukusetshenziswa okuyoholela kwelulama ngaphandle kwemiphumela. Ukuze aphumelele yokwelapha kuyadingeka ukuze anamathele ohlotsheni lokudla, ezazihlanganisa Vitamin C ukudla okunothe kumele ngempela kube khona. B amavithamini zisiza ukwelapha.
ngokukhethekile kufanele ikhokhwe yokuthi esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe emphinjeni oncelisayo. Yiqiniso, kwemithi yesimanje manje kwenza ukhetho olukhulu, futhi lo dokotela kumele kube ekumisweni ejenti acabangele iqiniso ibele, kodwa, nokho, qaphela ukuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa equkethe ngisho umthamo esincane semithi elwa namagciwane is hhayi Kunconywa, njengoba engena ubisi lwebele futhi kungalimaza umntwana. Ukuze gargling ephumelela kunazo Folk remedy neyaziwayo umhluzi camomile noma marigold, futhi phakathi kwemithi kanjalo uyazonga Bioparox kubhekwe. Uma kuwukuthi wayelingana ingane iyagula, qiniseka udinga kuqala uxhumane nodokotela wakho esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe emphinjeni in izinsana. nodokotela bezingane abaningi linqume izidakamizwa ezifana Septifril, Aflubin, Lisobakt. Ngesikhathi esifanayo, akuzona zonke umama ufuna ukunikeza amaphilisi enganeni yakho. Kulokhu, usizo kuyofika zonke chamomile efanayo futhi Calendula. Ukusebenzisa isipetu kakhulu kudingeka ngokucophelela ukuze nginisele Intamo obukhulu. Ungase futhi wenze futhi unike izingane a camomile itiye efudumele.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-self kungaholela yezinkinga namanje ukuya kudokotela ukuze uthole ulwazi esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe emphinjeni, njengalapho umdlezane nosana.
Sibhedlela "Metallurg" (Sochi) Izibuyekezo zezivakashi
Research Institute Clinical of Otorhinolaryngology kubo. LI Sverzhevskogo (eMoscow): umlando, incazelo. Ihlangano yokuNgeza Otolaryngology eMoscow: Izibuyekezo
Isici samathambo: ngesilinganiso abesifazane, ukuphambuka
Yini esiza isilungulela: Folk zokupheka
Kungani kungekho uxhumano "ku-Skype"? ukuhlaziywa enemininingwane
Amadombolo ethosiwe anyanisi, amazambane kanye amakhowe
Imidwebo: ukubukwa ka classical ezobuciko
"Makfa" - ufulawa, osekuyisikhathi eside isetshenziswa
Izinto ezinhle ngezandla zakhe. Decoupage amabhokisi
Kefir izinwele - umthombo wezempilo nobuhle
Indlela yokubingelela Ramadan nokuthi unike amaSulumane?
Izibonelo Imininingwane inhloso kanye olubandlululayo